Mampiray sy manome antsika fiadanana Andriamanitra (Mat.18:15,17)
Lesona 10 : Mamerina amin'ny laoniny ny fifandraisana tapaka Andriamanitra
Catégorie : Lesona 10 : Mamerina amin'ny laoniny ny fifandraisana tapaka Andriamanitra
Vakio ny Mat. 18:15-17. Zavatra telo no ambaran'i Jesosy ho fanampiana antsika handravona ny adilahy mitranga rehefa misy olona manao ny tsy mety amintsika ao am-piangonana. Inona avy ireo zavatra telo ireo? Ahoana no fomba hampiharantsika izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro?
Nanome io torohevitra io i Jesôsy ao amin'ny Mat. 18 ho fiarovana ny fiadanana sy ny filaminana ao amin'ny fiangonana; tsy tiany hiitatra ihany koa ny olana. Iriny mba ho voafetra ao anaty vondrona kely araka izay azo atao ny olana misy eo amin'ny samy mpino. Izany no antony Jesôsy ny mba hiezahan'ireo olona roa manana olana hamaha izany eo amin'ny roa tonta aloha (Mat. 18:15). Arakaraka ny maha-maro ny olona tafiditra ao anatin'ny olana iray no hitomboanizany. Izany koa dia mandrava ny fiadanana sy ny fifanarahan-tsaina ao am-piangonana. Kanefa rehefa miezaka ny Kristianina mba hamaha ny olany manokana amin'ny mangingina, am-pitiavana sy am-pitsinjovana ny namany, dia mety hihavana indray izy ireo, ary ny Fanahy Masina dia hiara-miasa aminy mba handamina ny adiny.
Indraindray dia tsy afaka mamaha ny olana raha olona roa fotsiny. Noho izany dia manasa antsika i Jesôsy mba haka olona iray na roa hafa hiaraka amintsika. Te hamerina amin'ny laoniny ny fihavanan'ny olona ny Tompo fa tsy ny hampisara-bazana azy ireo. Noho izany, rehefa avy niezaka hamaha ny olantsika miaraka arnin'ilay olona tsy mifanaraka amintsika ihany isika vao afaka manaraka io torohevitra io. Ilay olona iray na roa nantsoina dia tsy hoe hiady ho anao na koa hanome tsiny ilay olona nandratra anao tsy akory, fa ny mba hanoro amim-pitiavana sy hivavaka ho an'io asa fampihavanana io, ho amin'ny fiadanana sy fifanarahan-tsaina kristianina.
Indraindray koa dia tsy mahavaha ny toe-draharaha izany rehetra izany. Noho izany dia asain'i Jesôsy mitondra ny olana eo anatrehan'ny fiangonana isika. Tsy midika anefa izany hoe hitsangana ao anatin'ny fotoan'ny Sekoly Sabata isika ka hitantara ny olantsika amin'ny olona rehetra. Ny tsara indrindra dia ny mitondra izany eo amin'ny komitin'ny fiangonana. Ny drafitr'Andriamanitra manontolo dia natao hitondra fiadanana.
"Aoka tsy hivadika ho fankahalana ny fihetseham-po ratsy ao anatinao. Aza avela hanonitra ao anatinao ny ratra nataon'olona taminao ka hiteraka teny feno poizina. Aza avela hameno ny sainao sy ny sain'ilay nandratra anao ny fihetseham-po mampalahelo sy ny fisainana feno hatezerana. Manatona azy amin'ny fo feno fanetren-tena, ka amin'ny hatsaram-po no hiresahanao ny olana amin'ilay rahalahinao ao amin'i Jesôsy" GW, t.499.